Isamsung kunye neXioami ziya kuba nazo Windows 10 ilaptops eneeprosesa zeSpapdragon | Iindaba zeGajethi
Ikamva leelaptops kukusetyenziswa kweeprosesa ezihambayo. Oku kufezekisa inkululeko enkulu yebhetri-egqitha usuku olusebenzayo ngokulula-kunye nexabiso eliphakathi. ASUS, I-HP okanye iLenovo ngamanye amagama okuqala abanga ukuba bazakufika kwintengiso ngeemodeli ezithile. Nangona kunjalo, ayizukuphela kwabo. Y Iimpawu ezaziwayo njengeSamsung okanye iXiaomi ziya kubheja kweli qonga litsha.
Iinkcukacha malunga nokuba la maqela aya kuba njani azikaziwa. Ngaphezulu, akukho nkampani iye yaqinisekisa iinjongo ukuba i-portal ivuza UFudzilla. Ngoku, njengakwamanye amaqela asele ebonisiwe, baya kuba nokukhanya okukhanyayo kunye nomzimba omncinci kunye nazo zonke iintlobo zonxibelelwano. Ngaphezulu kwako konke, ezo zisivumela ukuba sinxibelelane kwi-intanethi naphi na.
Ngexesha lesithathu lokuqala le-2018, iimveliso zokuqala ziya kuphehlelela iimveliso zazo. I-ASUS kunye ne-HP sele zilungile, nangona kubonakala ngathi, Umphathi othile weQualcomm sele egqabazisile ukuba amaqela exesha elizayo asekwe kwiiprosesa zeQualcomm kulindeleke ukuba zingabi namandla kangako kuneemodeli zombini.
Ukusuka kwi-Samsung kuqikelelwa ukuba imodeli yokuqala inokubonwa kwiiveki ezimbalwa eLas Vegas kunye ne-Samsung Galaxy S9 nakwinkampani yezinye iilaptops ezihlaziyiweyo ezinjengeNqaku leNqaku leSamsung 9 leSamsung. ezahlukeneyo ezimbini. Ngeli xesha, UXiaomi ungene kwicandelo leencwadana kunyaka ophelileyo; ngowona mtsha kubo bonke okhuphisana nabo. Nangona oku kungathethi nto: uphononongo lwezixhobo zabo zilungile kwaye zihlala ziyenye yezona ngcebiso ziphambili kubasebenzisi abafuna umgangatho olungileyo / ixabiso elingafaniyo.
Ke ngoko, nangona uXiaomi engakhange athethe nto ngeenjongo zayo, singatsho ukuba, nge iinkxalabo zebrendi malunga nokubeka ezazo iimveliso kwicandelo ngalinye lobuchwepheshe, ezi laptops zisekwe kwiqonga le-ARM aziyi kuba yimeko eyodwa e-China.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » Isamsung kunye neXioami ziya kuba nazo Windows 10 ilaptops eneeprosesa zeSpapdragon